Kwa - libya-canada.org
Emere Super Bowl Winner Kwa Afọ!
(Ma ọ bụ, Ọ nwere ya?)
Mgbe ị na-arụ ọrụ ebe a na ụlọ ọrụ na-eme mmanụ ala chalị chalị abalị dịn’ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ, AKA Experts Casino, ị chọpụtara na, ee, anyị MEE ezigbo oge”na ụgwọ ụlọ ọrụ.”
Taa bụ otu n’ime ụbọchị ndị ahụ.
The muckety-mucks here in The Aces Casino Blog kpebiri (obere oge azụ) na Wednesday, Jenụwarị 30th, 2019, ga-abụ ụbọchị nke ụlọ ọrụ anyị na-enye ndị mmadụ ọtụtụ afọ Super Bowl 53 mmeri amụma. Ugbu a, amaara m ọtụtụn’ime ndị na – agụ akwụkwọ anyị nwere ike tinye ihe a dị mkpan’etiti”Gee-Whiz,” na”Canye Na-eche Banyere,” mana,n’eziokwu, websiten’echiche akụkọ ihe only eme ebe a t Aces Casino Blog, ọ pụtara ọtụtụ.
Ee, ọ bụ eziokwu… Anyị bidoro emume that a na-eme kwa afọ dị ka ngụkọta ngwụcha azụ d e mbido 1995 naanị iji kpori ndụ na ndị na-enyocha amụma kwa afọ ga-apụta na TV na redio miniature nye ha ihe kpatara otu a ma ọ bụ otu ahụ. ohere ịpụta mmeri. (Yawn.) Ọfọn, anyị chere na ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịbanye na amụma ahụ, onwe anyị.
Na otu obere caveat. Chi nke na-ebu amụma kwa afọ Super Bowl maka Aces Casino enweghị ike ịbụ mmadụ.
N’ụzọ ahụ, ọ ga – ga abụ naanị ihe na – atọ ụtọ, ọ nweghị onye nọ ebe a t Aces Casino nwere nsogbu maka nhọrọ ya. Anyị na-takin ‘mfe ụzọ. Anyi na-echeta ubochi mkparita uka a malitere banyere onye (ma obu gini) kwesiri ichoro anyi. Ben Miller only ka ikpe that a jiri yokel nke obodo anyị,”Henny-Penny,” ọkụkọ na-akpọ ọkụkọ nke Knott’s Berry Farm. Aces Casino dị na Buena Park, na Knott dị n’okporo ámá. Oge ọ bụla anyị gafere na Knott, anyị ga-eleta Henny-Penny, ma kwụọ ụgwọ 25-cent iji nụ ka ọ na-akọ ivor.
Ya only – Na Jenụwarị nke 1995, anyị gafere na Knott’s iji chọta Nwada Penny, mgbe anyị mechara, anyị gbagara onye na-elekọta Henny, nwoke aha un bụ Fred Nabors. Anyị bịara Knott na okpu agha abụọ maka Super Bowl 29 (Chargers na 49ers), wee jụọ Fred ma ọ ga-ahapụ Henny Pennyn’ụlọ nga un, miniature hapụ ya ka ọ họrọ.
O only… Na ụbọchị ahụ, Henny-Penny họpụtara 49ers iji merie SB 29.
Na mgbe ahụ…. . N’ime afọ iri na isii sochirinụ, anyị ga-alaghachi na Knott, chọta Fred Nabors, wee nweta Henny Penny ka ọ họrọ kwa afọ. Nsonaazụ – Henny Penny gara 17-na-efu na-ewere Super Bowl. Henny Penny lara ezumike nká (opekata mpe, anyị nwere olile anya d e ọ’lara ezumike nká’) mgbe anyị họpụtachara 17, anyị na-ejikwa ụmụ anụmanụ eme ihen’ogologo, iji mee nhọrọ anyị.
Ee, anyị ji anyị Super Bowl amụma kpọrọ (Ed. Mara: Bwahahahaa.) , Na iji gosipụta nke a bụ eziokwu, ọ bụ oge iji nye anyị ukara amụma na nke otu ga-emeri na SB 53. Lee Honey, nkịta, Id amụma!
Uhh, ee, OK, nke ahụ agaghị arụ ọrụ.
Ọ D, MMA, doro anya, Experts Casino Entertainment mascot, Mmanụ aeyụ, Puggle, kpebiri na ọ ga-achọ ịkwụ ụgwọ, iji nye anyị nhọrọ ya. Yabụ, mgbe anyị chọtara ọgwụgwọ doggie abụọ, ma tinye otu d e okpu okpu okpu ọ bụla na-anọchite anya ìgwè abụọ ahụ, HERE anyị bụ amụma Experts Casino Blog nke otu ga-emeri SB 53!
Ọ dị ka ndị Patriots, nwa ọhụrụ. Ga-akwụ ya, ma nwetara ghota.
Yabụn’ebe ahụ ka inwere ya, ụmụnwanyị d e ụmụnwoke – Website d e ụlọ ọrụ enyerela gị 21n’ime 22 Super Bowl ndị meriri d e afọ 20 + gara aga, ụlọ ọrụ agba agba agba agba agba agba agba abalị na SoCal, ị nwere ike izuike, ma ọ bụrụ na ị re a Patriot onye ofufe. Mmanụ aeyụ ahọrọla New England dị ka onye mmeri nke SB 53. Kporie egwuregwu ahụ, onye ọ bụla! Anyị ga-alaghachi na Mọnde iji mee emume ọzọ ziri ezi. (Ed. Mara: Etinyela m self m.) Nwee obi ụtọ, anyị ga-ahụ yan’izu na-abịa!